UKhanye akayizwa ekaHunt kwiChiefs
UKAIZER Motaung umelwe wukugwinya ukuphoxeka aqale phansi abumbe iqembu lakhe iKaizer Chiefs ngemuva kokuphucwa isicoco seligi Isithombe: TWITTER/KaizerChiefs
OWAYENGUMDLALI weKaizer Chiefs, uJunior Khanye, ushaya amakhala ngendaba kaGavin Hunt okuvela ukuthi angase athathe indawo ka-Ernst Middendorp eNaturena ngesizini ezayo.
Amakhosi aphucwe yiMamelodi Sundowns isicoco se-Absa Premiership ngosuku lokugcina lwemidlalo yeligi.
Abanye abalandeli babona ukuthi kumele yenze izinguquko maduzane okubalwa kuzona ukukhonjwa indlela kukaMiddendorp.
Sekuvele kusabalele ukuthi iChiefs isizoqeda izingxoxo noHunt oshaya ngerekhodi lokuwina isicoco seligi kane.
“Ngabe ishaye eceleni iChiefs uma ingaqasha uHunt. Akukho azoyenzela khona. Uzosayinisa inqwaba yabadlali njengoba kade enza kwiBidvest Wits kodwa agcine engawini lutho.
“Kwalabo badlali asazi ukuthi ngeke libasinde yini ijezi leChiefs ngoba akulona elanoma yimuphi umdlali.
“Uyakuzalelwa ukudlalela iChiefs. Ikhono nokusebenza kanzima akwanele laphaya. Udinga isibindi, ukukwazi ukumela ubunzima nokulangazelela ukuwina,” kusho uKhanye.
Yize uKhanye ekhuluma kanje, uHunt unqobele iWits iligi okokuqala ngqa, wadlala iMTN 8 neTelkom Knockout.
Ezinyangeni ezedlule uKhanye uphenduke isitha sabalandeli beChiefs ethi ngeke iyiwine iligi ngebhola likaMiddendorp phezu kokuba ibikade ihlezi phezulu futhi ivule igebe ngenqwaba yamaphuzu.
“IChiefs kufanele ishaye iphakethe ilande u-Eric Tinkler, asizwe wuDan Malesela. Laba bazokwazi ukubuyisela indlela iChiefs okufanele idlale ngayo nokuletha ukuzethemba kubadlali. UTinkler usezibonakalisile ukuthi uyayazi into ayenzayo. IChiefs idinga umqeqeshi onjalo,” kusho uKhanye.
UTinkler uthathe izintambo kwiMaritzburg United ngesizini edlule wayivikisa izembe njengoba kulena esanda kusongwa iqede kwiTop 8. Useke wanqoba isicoco seTelkom Knockout neCape Town City ngo-2016.
Ukuphela kwenye isizini iChiefs ingawinanga lutho sekuvulele impikiswano ngezinga labadlali abakuyona, abakhulele khona nabasuka kwamanye amaqembu.
UKhanye uthe iChiefs kufanele ibuyele ezimpandeni, ibuyise indlela yokudlala eyaziwa ngayo. Ubalule abaqeqeshi akholwa wukuthi bangalibuyisa isiko laMakhosi lokuyidlisa utshani.
“Okokuqala iChiefs kufanele izehlise, ibuyise uFarouk Khan azoba yinhloko yenkulisa. Yena aqoke abaqeqeshi abazosebenza nabadlali beminyaka ehlukene okunguZipho Dlangalala, Sam Mbatha, Mandla Mazibuko, Simon Ngomane. Bonke laba baqeqeshi bafunde kuTed Dumitru indlela yokudlala yokugcina ibhola,” kusho uKhanye.
“Ngesikhathi sikaFarouk kwiChiefs kuqhamuke abadlali okukhona kubona uJabu Mahlangu, Thabiso Malatsi, Nhlanhla Kubheka, Isaac Mabotsa nabanye. Selokhu ahamba akekho umdlali onyuselwe esikimini esikhulu wafika wagqama. IChiefs idinga ukubuyela esikweni layo nenhlobo yabadlali abangayidlalela.”